Target Scholarship Application Portal collegescholarships.org 2021 Update: လက်ရှိကျောင်းသတင်း
Target Scholarship လျှောက်လွှာ - Target Corporation သည်ကျောင်းသားများကိုပညာသင်ဆုနှင့်ထောက်ပံ့ကြေးများစွာပေးသည်။ သို့သော်ကျောင်းသားများသည်အရည်အချင်းပြည့်မီမှုစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီရမည်။ ထို့အပြင်အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ Target ပညာသင်ဆုအတွက်မိတ်ဖက်များအနေဖြင့်နောက်ထပ်ဘဏ္financialာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုဖန်တီးနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်ကျောင်းသားများသည်၎င်းကိုရယူနိုင်သည် ပညာသင်ဆု အခမဲ့ဖြစ်သည်အွန်လိုင်း။ သို့သော်ဤပညာသင်ဆုနှင့်၎င်း၏အကြောင်းပိုမိုသိရန် အရည်အချင်းပြည့်မီလိုအပ်ချက် ဒီအပိုင်းအစကိုဆက်ဖတ်ပါ ဒါ့အပြင်ဒီဆောင်းပါးမှာဒီရက်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့သတင်းကိုသင်ရလိမ့်မယ် ပညာတတ်။ လျှောက်လွှာတင်ရန်မည်သို့မည်ပုံ၊
ပစ်မှတ်ကော်ပိုရေးရှင်း အမေရိကန်လက်လီကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရှစ်ယောက်မြောက်အကြီးဆုံးလက်လီအရောင်းဆိုင်ဖြစ်သည် အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု။ ထို့အပြင်၎င်းသည် S&P 500 ညွှန်းကိန်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် Target Australia နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။
Target သည် ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်များတွင် Dayton-Hudson ကော်ပိုရေးရှင်း၏နေ့အချိန်ခွဲခြားမှုအဖြစ်သူ့ဟာသူတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ပြီးတော့ ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေတုန်းကတစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်။ ထို့အပြင် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်များတွင် Target အမှတ်တံဆိပ်အောက်တွင်စတိုးဆိုင်ပုံစံအသစ်များကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီသည်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်စျေးပေါ - chic ကစားသမားအဖြစ်အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်။ မိခင်ကုမ္ပဏီကို ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် Target Corporation ဟုအမည်ပြောင်းခဲ့သည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်၎င်း၏နောက်ဆုံးစတိုးဆိုင်ဆိုင်ခွဲများမှလွှဲပြောင်းယူခဲ့သည်။
Target Corporation ၏နားလည်မှု
ကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းကြီးများနည်းတူ Target သည်သူတို့၏အောင်မြင်မှုသည် ၄ ​​င်းတို့လည်ပတ်နေသည့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ၏တက်ကြွမှုအပေါ်အခြေခံသည်ကိုနားလည်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ဒေသဆိုင်ရာနှင့်အမျိုးသားပရဟိတလုပ်ငန်းများကိုထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ရပ်ရွာလူထုကိုပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်းသည်၎င်းတို့၏ကော်ပိုရိတ်တာ ၀ န်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်ကို၎င်းင်းကနားလည်သည်။
Target ၏ကုသိုလ်ဖြစ်လှုပ်ရှားမှုများတွင်အဓိကအားမှာပညာရေးကိုအလေးထားသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ပညာရေးဆိုင်ရာအစပျိုးအမျိုးမျိုးကိုထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ ဤရွေ့ကား အစီအစဉ်များ မူကြို၊ အတန်းကျောင်းနှင့်အထက်တန်းကျောင်းသားများအတွက်ပညာရေးအရည်အသွေးတိုးတက်အောင်အာရုံစိုက်သည်။ ထိုအကောလိပ်ကိုပိုမိုသုံးစွဲနိုင်အောင်အပေါ် အထက်တန်းကျောင်း ဘွဲ့ရ။
Target Scholarship အမျိုးအစားအချို့
၁။ အာဖရိကန် - အမေရိကန်နှင့်ဟစ်စပန်းနစ်ကျောင်းသားများပညာသင်ဆု
ဤပညာသင်ဆုသည်ဟစ်စပန်းနစ်နှင့်အာဖရိကန် - အမေရိကန်အသိုင်းအဝိုင်းများရှိကောလိပ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကျောင်းသားများကိုထောက်ပံ့ရန်နှင့်အားပေးရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ သို့သော်လျှောက်ထားသူသည်ငွေရေးကြေးရေးလိုအပ်ချက်ကိုပြသရမည်။ တိကျသောပညာရေးစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီရမည်။ ထို့အပြင် ၄ င်းတို့၏လူမှုအသိုင်းအ ၀ ိုင်းများကိုတာဝန်ယူရန်ကတိကဝတ်ပြုရမည်။
ထို့အပြင်၎င်းသည်ထိုက်တန်သောအထက်တန်းကျောင်းသားများအားကောလိပ်ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်သောသူတို့၏အိပ်မက်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ကူညီရန်ရည်ရွယ်သည်။ ရှစ်ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ကိုထောက်ပံ့ရန် United Negro College Fund နှင့်လည်းပစ်မှတ်ထားပါသည် ပစ်မှတ် / UNCF လူထုခေါင်းဆောင်များပညာသင်ဆုများ.
ဤပညာသင်ဆုကိုအာဖရိကန် - အမေရိကန်ကျောင်းသားများအတွက်ရရှိနိုင်သည်။ သို့သော်လျှောက်ထားသူများကိုလက်ရှိ UNCF အဖွဲ့ဝင်ကောလိပ်များသို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်တစ်ခုတွင်စာရင်းသွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
၂။ Target Fashion Scholarship
Target ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်အမေရိက၏ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာများကောင်စီတို့သည်နှစ်စဉ် Target Fashion Scholar အစီအစဉ်ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဒီပရိုဂရမ်ကထူးခြားတဲ့ဒုတိယအဆင့်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကိုဒေါ်လာ ၂၅၀၀၀ ပညာသင်ဆုပေးတယ်။
သို့သော်လည်း၊ ကျောင်းသားသည် CFDA ပါ ၀ င်သောကျောင်းတစ်ခုတွင်စာရင်းသွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ငွေကြေးဆိုင်ရာဆုအတွက် Target သည်ပညာသင်ဆုဆုရှင်အားသူတို့၏ဌာနချုပ်သို့လာရောက်ရန်စီစဉ်သည်။ ၎င်းသည် Target Design Team နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ စီအပိုဆောင်းပညာသင်ဆုလေးခုကို Target Fashion Scholars အစီအစဉ်တွင်အပြေးသမားလေးယောက်အားချီးမြှင့်သည်။
ရည်မှန်းချက်အားလုံး - ပတ်ပတ်လည်ပညာသင်ဆု
တစ်ချိန်ကမယုံနိုင်လောက်အောင်လူကြိုက်များပြီးလူသိများတဲ့ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် All- ပတ်ပတ်လည်ပညာသင်ဆု နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း Target Corporation သည် ၂၁၀၀ ဆုရရှိခဲ့သည် All- ပတ်ပတ်လည်ပညာသင်ဆုများ.
နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးရှိကောလိပ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကျောင်းသားများအတွက်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ဒီပညာသင်ဆုတွေကအဆင့်မြင့်ပညာရေးအောင်မြင်မှုကိုပြသခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေကိုအကျိုးပြုဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတာ။ နှင့်ရပ်ရွာဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဆည်းကပ်။ ထို့အပြင်နှစ်စဉ်ဒေါ်လာ ၄၀၀၀၀ အမျိုးသားပညာသင်ဆုကိုချီးမြှင့်သည်။
ထို့အပြင်အမျိုးသားဆုမှသတိပြုပါ။ Target စတိုးတစ်ခုစီသည်ရပ်ကွက်အတွင်းရှိကျောင်းသားများကိုပညာသင်ဆု ၂ ခုချီးမြှင့်သည်။ သို့သော်လက်ခံသူများသည်သူတို့၏အထက်တန်းကျောင်းပညာသင်ကြားမှုတွင်ထူးချွန်အောင်မြင်မှုရှိရမည်။ ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းကို ဦး ဆောင်မှု၊
တစ်ဘို့အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ် ပစ်မှတ်ပညာသင်ဆုလျှောက်လွှာ, မှတ်စု:
ကျောင်းသားများသည်အသက် ၂၄ နှစ်အောက်အထက်တန်းကျောင်းဘွဲ့ရများဖြစ်ရမည်၊ အသိအမှတ်ပြုထားသောကောလိပ် (သို့) တက္ကသိုလ်ရှိဘွဲ့ကြိုအစီအစဉ်တွင်စာရင်းသွင်းထားသူများ (သို့) မကြာမီစာရင်းသွင်းရန်ရှိသည်။
ကျောင်းသားများသည်အနိမ့်ဆုံးရှိရမည် GPA အဓိကဘာသာရပ်အားလုံးတွင်ဘွဲ့ယူထားသည့်ကျောင်းသားများအတွက်ပညာသင်ဆုကို ၃.၀ ရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။
ရည်မှန်းထားသောပညာသင်ဆုလျှောက်ထားရန်နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်သည် ၂၀၂၀၊ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ရည်မှန်းထားသောပညာသင်ဆုလျှောက်လွှာနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါကမှတ်သားပါ။ 1-2020-1-800 တွင်ကျောင်းသားများသည်ကုမ္ပဏီနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်သင့်သည်။
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာသတိပြုပါ မနက်ဖြန်၏ခေါင်းဆောင်များသည်ယနေ့လူငယ်များဖြစ်သောကြောင့် Target ပညာသင်ဆုကလူငယ်များကိုသူတို့၏အိပ်မက်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အားပေးသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် ၄ ​​င်းတို့၏ကျောင်းများနှင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများတွင်အောင်မြင်မှုများရရှိရန်ကြိုးပမ်းနေသောကျောင်းသားများအားဆုချခြင်းဖြစ်သည်။
Target ပညာသင်ဆုလျှောက်လွှာအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက, မှတ်စု။ ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်အချက်အလက်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။
APPLICATION သို့ LINK
လျှောက်ထားရန်အခမဲ့ခံစားရသည်။ သို့သော်သင်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းသေချာပါစေ။ ကံကောင်းပါစေ။
Hallmark တက္ကသိုလ် Post UTME Form ကို 2020/2021 စိစစ်လျှောက်လွှာလုပ်ငန်းစဉ်
FUTMINNA 2020/2021 Session Admission Screening အတွက် Mark ကိုဖြတ်တောက်ခဲ့သည်
နိုင်ဂျီးရီးယားရှိအချိန်ပိုင်းနှင့်အချိန်ပြည့် 2019 အတွက် System Admin Jobs
TS EAMCET 2021 လျှောက်လွှာကိုမည်သို့ဖြည့်ရမည်နည်း လမ်းညွှန်အပြည့်အစုံ
SABMiller Plc ကိုယ်စားလှယ်လောင်း 2020/2021 | List ကိုကြည့်ပါ
အစိုးရပိုင်အဖွဲ့အစည်းများတွင်ထိရောက်သော ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်ပြနာများ
Wood Mackenzie - 2016 တွင်အရောင်းစာရင်းကိုင်မန်နေဂျာအဖြစ်ယခုလျှောက်ထားပါ
« JAMB CBT Practice 2021 အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဒေါင်းလုပ်နှင့်အပြည့်အဝ activation
နိုင်ဂျီးရီးယားကျောင်းသားများအတွက်နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်ပညာသင်ရန်ပညာသင်ဆု (၂၀၂၁) လျှောက်လွှာစာရင်း »
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ သင်ချစ်မြတ်နိုးရသူများအတွက်အကာအကွယ်ရရန်ဆုတောင်းခြင်း
WAEC နမူနာမေးခွန်းများ 2021 နှင့်အားလုံးဘာသာရပ်များအတွက်အစီအစဉ်များ
Kaduna ဆရာများစုဆောင်းမှု 2021/2022 နောက်ဆုံးလျှောက်လွှာပုံစံ Portal ကိုကြည့်ပါ
စျေးပေါသောကားငှားရမ်းခြင်း - စျေးနှုန်းချိုသာသောနှုန်းထားဖြင့် ၂၀၂၁ အရည်အသွေးရှိသောကားများကိုမည်သည့်နေရာတွင်ငှားရမ်းမည်နည်း
Altara Credit Limited အလုပ်အကိုင် Portal 2021 www.altaracredit.com
Altara ခရက်ဒစ်လီမိတက်စုဆောင်းမှု 2021/2022 လျှောက်လွှာ
Wema ဘဏ်စုဆောင်းမှု 2021/2022 လျှောက်လွှာ Update ကို Portal ကိုစစ်ဆေးပါ
နိုင်ဂျီးရီးယားလေတပ် DSSC စုဆောင်းမှုပုံစံ 2021 www.airforce.mil.ng/apply-now
TSB စုဆောင်းမှု Dashboard 2021 လျှောက်လွှာအခြေအနေစစ်ဆေးပါ
နိုင်ငံအားလုံးအတွက်ဗီဇာလျှောက်ထားခကိုစစ်ဆေးပါ 2021 Updates
nafrecruitment.airforce.mil.ng Login Portal 2021 လျှောက်လွှာလမ်းညွှန်
နိုင်ဂျီးရီးယားလေတပ် DSSC စုဆောင်းမှု ၂၀၂၀ အတွက်ယခုလျှောက်ထားပါ
နိုင်ဂျီးရီးယားလေတပ် DSSC စုဆောင်းမှု 2021/2022 လျှောက်လွှာပုံစံ Portal ကိုကြည့်ပါ
WAEC GCE စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံနမူနာ 2021 နမူနာအပြည့်အဝစစ်ဆေးပါ
WAEC GCE ရူပဗေဒနမူနာ 2021 ပြီးပြည့်စုံသောလက်တွေ့နမူနာစစ်ဆေးပါ
Para- စစ်တပ်အတွက်တိုက်ရိုက်ဝန်ဆောင်မှုတိုတောင်းသောကော်မရှင် (DSSC) လိုအပ်ချက်များ
Guaranty Trust Bank စုဆောင်းမှု 2021/2022 လျှောက်လွှာပုံစံ Portal
Wema Bank Plc ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူမှု Portal 2021 www.wemabank.com တွင်ကြည့်ရှုပါ
Gtbank Login Portal www.gtbank.com ၀ န်ထမ်းအသစ်အပ်နှံမှုစစ်ဆေးခြင်း 2021 ကိုကြည့်ပါ